Dismahii Iskaashatooyinka dhagaxa nuuraddda iyo ciidda | Somali President Jaalle Maxamed Siyaad Barre
Dismahii Iskaashatooyinka dhagaxa nuuraddda iyo ciidda
Thursday, 10 February 2011 10:36
Golahii Sare ee Kacaanka iyo Golihi Xoghayayaasha Dawladda waxay wadajir ugu so baxay 25 go'aan oo taariikhda Kacaanka Soomaaliyeed kaga jirtay dhan weyn ee Ummadda Soomaaliyeed waxtar iyo qaayaba u leh.
25-kaas go'aan waxaa ka mid ahaa, in qodaalka dhaqaxda, shidashada nuuradda iyo ciidda dhismaha oo markii hore ay dad gaar ah shatiyaal u haysan jireen, in laga dhigo iskaashato dhaqaale ah oo wixii macaash ah ee dad gaar ah ay heli jireen, gacaanta loo geliyo shaqaalihii markii hore xaqirnaa.
Go'aankaasi intuusan ka so bixin Golihi Sare ee Kacaanka iyo kan Xoghayayaashii Dawladda, kawooyinka dhagaxda, waxaa laga maamuli jirey Wasaaradda macdanta iyo biyaha, laakiin markii u go'aanku so baxay, maamulka iyo iskudubbaridka iskaashatooyinka, waxaa lagu so wareejiyey Wasaaradda Hawlaha Guud.
Dad dibusocod ah ayaa waxa isku dayeen in ay hor joogsadaan dhismaha iskaashatooyinka, iyagoo faafinaya wax qalbi jab gelin kara ruuxii aan isku kalsoonayn oo garadkiisuna aad u hooseeyo.
Inkastoo dhibaatooyin lagala kulmay dhismaha iskaashatooyinka, haddana waxaa laga gaaray guul weyn oo waxaa la dhisay 21 iskaashato; kuwaasoo ay ka mid yihiin labo iskaashato oo ka koobanta guulwadeyaal.
Markii la dhisay iskaashatooyinka dhagaxda; Wasaaradda Hawlaha Guud, waxay isla markiiba ku dhaqaaqday inay iskaashatooyinka ku barbaariso fikrad ku dhisan kacaannimo, iyadoo u dejisay barnaamij tababbar; hanuunin iyo far farbarasho ah oo lagu ciribtirayo aqoon la'aanta
Heesta hoos ku qoranna waxaa tiriyey nin ka mid ah Iskaashatada:
Waa dharaartii iskaashatada Dhagaxa jebisaa ay dhalatay oo iid bey nooga dhigantahoo waa ku dhaadanna.
1. Haddaan dhadhaab la jebin oo aan lagu dhammayn
Dhudhun iyo laxaad
Dhabbe lama mareen dhismana ama arkeen
2. Haddaan dhadhaab la jebin oo aan dhidid la qubin
Horuukac dhaqso ah maskax dhaxal gashiyo
Dhereg lama fisheen
3. Dhaaxay in badan dhiigmiiratadu
Nagu dhaansatee iska dhicinnayoo
Urur dhiirranoo aqoon dheer watoo
Miinada la dhigo ee lagu dhanbalo
Buurta dhumucda weyn ku dhiirrano
Ka dhursugaayannu nahay
Urur dhiidhiyoo aqoon dheer watoo
Daafaca dhulkana u dhaarsanoo u
Dhimanayoo ku dhiirrano ka dhursugaayannu nahay.